Article author 1 - February 24, 2020
2019 ခုနှစ်အတွင်း စမတ်ဖုန်းဝါသနာရှင်များကြားမှာ လူပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ 90Hz displays ဆိုတဲ့ Display Refresh Rate ပါ။ မြင့်မားတဲ့ Display Refresh Rate ဆိုတာ ဟိုးယခင်တည်းက monitor တွေဆီမှာ ရှိနေခဲ့ပြီးသားပါ။ ယခုနှစ်ပိုင်းလောက်မှသာ ဖုန်းတွေဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေဆီကို...
Article author 1 - February 10, 2020
2019 ခုနှစ်အတွက် အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်မှာ ရိုက်ခတ်ခဲ့တာကတော့ 48MP resolution နဲ့အတူ quad-pixel sensors တွေ ပါဝင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ စျေးအရမ်းမကြီးပဲ၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် စျေးနှုန်းကုန်ကျမှု သိပ်မရှိပဲ quad-pixel sensors နဲ့ ဖုန်းတွေကို ကိုင်ဆောင်လာနိုင်ကြပါတယ်။ Samsung ရဲ့ GM1 နဲ့ GM2 ဆင်ဆာတွေထက်တောင်...
Article author2- February 3, 2020
နည်းပညာလောကအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး၊ မျှော်လင့်ချင်စရာအကောင်းဆုံးနည်းပညာပြပွဲကြီးကို ဒီလရဲ့ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ကျင်းပသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MWC 2020 ပွဲကြီးကို ဖေဖော်ဝါရီ 24 ရက်နေ့ကစလို့ 27 ရက်နေ့အထိ ဘာစီလိုနာမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီပွဲကြီးမှာတော့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ 2020 ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချလာမယ့် အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်းတွေကိုလာရောက်ပြသကြပါတယ်။ ဒီနည်းပညာပွဲမှာ ပြသလိုက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ...
Article author 1 - January 2, 2020
Mid-range စမတ်ဖုန်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ budget ဖုန်းနဲ့ high-end ကြားထဲက လူတန်းစားအစုံသုံးနိုင်မယ့် စမတ်ဖုန်းလို့ တန်းမြင်ကြမှာပါ။ 2019 မှာဆိုရင် mid-range ဖုန်းတွေမှာ higher-end features တွေ ထည့်သွင်းလာကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သင့် Mid-Range စမတ်ဖုန်းကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီဖုန်းမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ premium features တွေကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။...
Article author 1 - December 17, 2019
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်လောက်ကသာ ကျစ်လျစ်သေးငယ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းလေးတွေဟာ ကင်မရာတွေနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်တယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရယ်သွမ်းသွေးစရာကိစ္စ၊ လှောင်ပြောင်စရာကိစ္စအနေနဲ့ ရှိနေမှာပါ။ အနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်အင်တွေကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အခု 2020 ခုနှစ်ကိုရောက်ဖို့ နီးလာတဲ့အချိန်မှာ 108MP ကင်မရာဆင်ဆာတွေတောင် ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ဖြစ်တန်စွမ်းတွေကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ 2019...
Article author2- December 14, 2019
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစလို့ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက် အဆင်ပြေစေမယ့် စမတ်ဖုန်းပေါင်းများစွာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ လူတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့လတွေကတော့ ဖေဖော်ဝါရီနဲ့စက်တင်ဘာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလတွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့နည်းပညာပြပွဲတွေဟာ အခြားလတွေမတူကွဲပြားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် apple september event လိုမျိုးတွေပေါ့။ အခုဒီဇင်ဘာလမှာလည်း အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်။ အသွင်မတူ၊ မတူကွဲပြားမှုတွေဟာအေးမြတဲ့ဒီဇင်ဘာနဲ့အတူ သင့်ကိုအေးစိမ့်စိမ့်အတွေ့အကြုံတွေပေးအုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် 2019 ဒီဇင်ဘာမှာ မိတ်ဆက်မယ့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွေကို စုဆောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာထွက်လာမယ့်...